Mhedziso yeRipoti reElectroniki Commerce muSpain (2013 edition) | ECommerce nhau
Mhedziso yeRipoti reElectronic Commerce muSpain (2013 edition)
Chirevo chakapihwa neOTSI (National Observatory yeTerevhizheni uye neInews Society) pamusoro pekuvandudzwa kwemabhizimusi emagetsi muSpain mugore ra2012 rinopa data rinonakidza paCommerce. Imwe yedhata inonakidza inoratidzwa neiyi mushumo ndeyekuti huwandu hwe e-commerce bhizinesi kumutengi wekupedzisira (B2C) yakawedzera ne12,3% uchienzaniswa negore rapfuura, pamwe nemari yakazara yakasvika pamamirioni emamiriyoni e12.383 muna2012.
Chirevo ichi chinoratidzawo imwe data yakanaka, senge kuwedzera kwehuwandu hwevatengi veInternet, zvekuti huwandu hwevatengi vepamhepo hwakawedzera ne15%, ichisvika 15,2 mamirioni.
Pasinei nezvose, kukura mukati megore ra2012 kwakaderera pane iyo yakasangana mu2011, apo kuwedzera kwacho kwanga kuri padyo ne20%. Uye zvakare, iro rekutenga vhoriyamu pamushandisi rakaderera zvishoma.
Zvisinei, kuchine zvakawanda tariro data. Tinoona zvimwe:
Kutenga kwakagadzirwa mukufamba kwakawedzera ne8%, zvese zvigadzirwa
Iyo muzana yevashandisi vakaita kamwe kutenga kamwe pamwedzi kuburikidza neInternet zvakare inowedzera, yakamira pa16,8%.
Mawebhusaiti anotengesa zvakanyanya pamhepo ndiwo makuru ekutenga chiteshi.
Kutengeserana pakati pevanhu (C2C) kwakawedzera.
Pakave zvakare nekuwedzera mukutenga kana kurodha pasi kwezvigadzirwa kana masevhisi kuburikidza nhare mbozha
Chirevo ichi chinoratidzawo zvimwe mabhureki izvo zviri kudzora kupinda kweCommerce muSpain, senge kusada kwevashandisi vazhinji kutenga chigadzirwa vasati vazviona, mari yekutumira, garandi yekudzosera mari uye kusavimba maererano nenzira dzekubhadhara uye chengetedzo yemunhu data.
Zvinofanira kutarisirwa kuti 55,7% yevaSpanish veInternet vakatenga kuburikidza neInternet muna 2012. Dzimwe nyika dzeEurope dzakadai seFrance kana United Kingdom dzakapfuura nhamba iyi, izvo zvinoratidza kuti kuchine basa rakawanda rekuita uye pamusoro pezvose, mikana yakawanda yekubata.
Kunobva - Kudzidza paElectronic Commerce B2C 2012 (2013 edition)
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Mhedziso yeRipoti reElectronic Commerce muSpain (2013 edition)
Zvakanakira nekuipira zvigadzirwa zvemagetsi
Iyo yakanakisa CMS yekuvaka yako online chitoro